कसरी डीफेक टेक्नोलोजी प्रभाव मार्केटिंग हुनेछ? | Martech Zone
बुधबार, डिसेम्बर 30, 2020 बुधबार, डिसेम्बर 30, 2020 Douglas Karr
यदि तपाईंले अहिलेसम्म यो प्रयास गर्नुभएन भने, मोबाइल अनुप्रयोग म यो वर्षको साथ सबै भन्दा मजा गर्दै छु पृष्ठ। मोबाइल अनुप्रयोगले तपाईंलाई आफ्नो अनुहार लिन र अर्को फोटो वा भिडियोमा कसैको अनुहार बदल्नको लागि तिनीहरूको डेटाबेस भित्र बदल्न अनुमति दिन्छ।
किन यसलाई डिपफेक भनिन्छ?
Deepfake सर्तहरूको संयोजन हो गहिरो अध्ययन र नक्कली। डीपफेक्सले मेशिन लर्निंग र कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई छल गर्न वा भ्वाइस र अडियो सामग्री उत्पन्न गर्न उच्च क्षमताको साथ धोका दिन्छ।
यो पृष्ठ मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गर्न को लागी सरल छ र नतीजा एकदम हास्यास्पद हुन सक्छ। म मेरा परिणामहरू यहाँ साझा गर्दछु। साइड नोट ... तिनीहरू धेरै छली छैन, केवल शर्मनाक, भयानक, र प्रफुल्लितकारी।
पृष्ठ अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
के डिपफेकहरू रमाईलो भन्दा पनि बढी डराउँछन्?
दुर्भाग्यवस, हामी यस्तो संसारमा बस्छौं जहाँ डिसफर्मेशन प्रचलित छ। नतिजाको रूपमा, डिपफेक टेक्नोलोजी त्यो हो जुन सधैं निर्दोषको रूपमा प्रयोग गरिदैन जस्तो मलाई नृत्य वा चलचित्रमा तारा बनाउने जस्तो देखिन्छ ... तिनीहरू डिसफर्मेशन पनि फैलाउन प्रयोग गर्न सक्दछन्।
कल्पना गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, छविहरू, अडियो, वा भिडियो फुटेज जसले राजनीतिज्ञलाई सेट अप गर्न डीपफेक टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। यदि यसलाई डीपफेकको रूपमा चिनिन्छ भने पनि परिणाम सामाजिक मत मिडियाको गतिमा यात्रा गर्न सक्छ मतदाताको रायमा हेरफेर गर्न। र, दुर्भाग्यवश, मतदाताको एक महत्वपूर्ण प्रतिशत - जबकि कम - यसले विश्वास गर्न सक्दछ।
यहाँ शीर्षकमा CNBC बाट एक महान भिडियो छ:
जस्तो तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, नियामकर्ताहरू र पत्ता लगाउने टेक्नोलोजी डिपफेक टेक्नोलोजीसँग लड्न प्रयास गर्न धेरै लोकप्रिय भइरहेको छ। निस्सन्देह यो चाखलाग्दो हुन गइरहेको छ ...
कसरी दीपफेक मार्केटिंगको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ?
यो डीपफेक मिडिया उत्पन्न गर्न टेक्नोलोजी खुला स्रोत हो र वेब भर मा उपलब्ध छ। जबकि हामी यसलाई आधुनिक फिल्ममा देख्छौं (१ 1970's० को दशकको क्यारी फिशरको दृश्य फुटेज रोग वनमा डिपफेकमा प्रयोग भएको थियो), हामीले तिनीहरूलाई मार्केटि inमा देखेका छैनौं ... तर हामी गर्नेछौं।
ट्रस्ट उपभोक्ता र ब्रान्डको कुनै पनि सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छ। कानुनी रूपरेखा बाहेक, कुनै पनि व्यवसायले उनीहरूको बिक्री र मार्केटि deep प्रयासहरूमा डिपफेक टेक्नोलोजी तैनाथ गर्नेमा हल्का कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ ... तर मैले अवसरहरू देख्दछु:
निजीकृत मिडिया - ब्रान्डले मिडिया उत्पन्न गर्न सक्दछ एकमात्र उद्देश्य को लागी तिनीहरुका ग्राहकहरु सम्मिलित गर्न को लागी। कल्पना गर्नुहोस् फेसन डिजाइनरहरू, उदाहरणका लागि, व्यक्तिलाई आफ्नो अनुहार र शरीरको समान्यता रनवे भिडियोमा सम्मिलित गर्न सक्षम गर्दछ। उनीहरूले देख्न सक्दछन् कि फेसन कसरी देखिने देखिन्छ (चालमा) कहिले पनि पोशाकमा प्रयास नगरी नै।
विभाजित मिडिया - भिडियो रेकर्डि and र सम्पादन विशेष गरी महँगो हुन सक्छ र ब्रान्डले चित्रण गरिएको डेमोग्राफिक्स र संस्कृतिहरूको प्रतिनिधित्वमा अधिक र अधिक ध्यान दिदै आएको छ। निकट भविष्यमा, एउटा ब्रान्डले एक भिडियो रेकर्ड गर्न सक्दछ - तर यसको भित्र विभिन्न डेमोग्राफिक्स र संस्कृतिहरू प्रतिनिधित्व गर्न सन्देश विभाजन गर्न डीपफेक टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ।
भिडियो मर्ज - ब्रान्डहरूसँग उनीहरूको बिक्री प्रतिनिधिहरू वा नेताहरू स्टार्ट भिडियोहरूमा तारा हुन सक्छन् जुन डीप फ्याक्स हो तर तिनीहरूलाई सम्भावित वा ग्राहकसँग सीधा कुराकानी गर्न निजीकृत गरिएको छ। यस प्रकारको टेक्नोलोजी पहिले नै प्लेटफर्मको साथ उपलब्ध छ संश्लेषण। जबकि मँ विश्वास गर्दछु कि ब्रान्डले डिप फाकको खुलासा गर्नु पर्दछ, यो प्रत्येक व्यक्तिसँग व्यक्तिगत रूपमा प्रत्यक्ष बोल्नको लागि ध्यान पुर्‍याउने विधि हो।
अनुवादित मिडिया - ब्रान्डहरूले भाषाहरूमा प्रभावकर्ताहरूको उपयोग गर्न सक्दछ। यहाँ डेभिड बेकहमको एक उत्कृष्ट उदाहरण छ - जहाँ उनको समानता ध्यान आकर्षित गर्दछ, तर सन्देश सही अनुवाद गरिएको छ। यस अवस्थामा, तिनीहरूले अन्य आवाजहरू र डीपफेक टेक्नोलोजी मुख मुखको लागि प्रयोग गर्दछन् ... तर उनीहरूले अडियो प्रतिस्थापन गर्न डीपफेक पनि प्रयोग गर्न सक्दछन्।
यी सबै उदाहरणहरूमा, डिपफ्याक त्यहाँ धोका दिनका लागि छैन तर सञ्चार सुधार गर्न। यो एक पातलो रेखा हो ... र व्यवसायहरू यसलाई सावधानीपूर्वक हिंड्नु पर्ने हुन्छ!
यसलाई राम्रो नोटमा अन्त गरौं ...
खुलासा: म यसको लागि मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछु Reface अनुप्रयोग। म अत्यधिक सशुल्क संस्करणको सिफारिस गर्दछु जसले गडबडी गर्न एक टन थप मिडिया प्रदान गर्दछ।
टैग: संबद्धगहिरो शिक्षागहिराइडीपफेक टेक्नोलोजीपुन: सुधार